कांग्रेससँग लाग्दा माओवादीले चुनाव हारेको प्रचण्डको निष्कर्ष, बैठकमा के के भने ? - Dainik Nepal
कांग्रेससँग लाग्दा माओवादीले चुनाव हारेको प्रचण्डको निष्कर्ष, बैठकमा के के भने ?
जनताले खोजेजस्तो माओवादी हुन नसकिएको स्वीकारोक्ति
दैनिक नेपाल २०७४ साउन २ गते १५:०५
काठमाडौं, २ साउन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा आफ्नो पार्टी हार्नुको कारण खुलाएका छन् ।
सोमबारदेखि पेरिसडाँडामा शुरु भएको पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्दा चुनावमा अपेक्षित परिणाम नआएको बताएका हुन् । ‘हामी आफ्नै तरिकाले चुनाव लड्नुपर्थ्र्यो,’ बैठकमा उनले भने– ‘ काँग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्दा यस्तो अवस्था आयो । हाम्रो तरिकाले चुनाव लड्न नसक्दा यस्तो भयो ।’ यद्यपी उनले हारका लागि पार्टी नै जिम्मेवार भएको स्वीकार गरे ।
अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्रको गुटलाई पनि हारको कारण देखाए । ‘आजबाट पार्टीभित्र रहेका सबै गुट विघटन गरौँ । होइन भने घोषित रुपमा चलाऔँ,’ आक्रोशित हुँदै उनले भने । केन्द्रीय कमिटी पनि ठिक नभएका कारण माओवादी हारेको प्रचण्डको ठहर छ ।